Iza moa i Sarah Potenza? Ny zava-drehetra momba ilay mpifaninana 'The Voice' teo aloha izay nahazo fiderana tamina AGT niaraka tamin'ny famoahana an'i Mary Gauthier 'Mendrika' - Pop-Kolontsaina
Nisy endrika mahazatra niseho tamin'ny fizarana anio alina an'ny America's Got Talent, Sarah Potenza. Ireo izay mpankafy ny The Voice dia tena hahafantatra azy.
Potenza dia niseho tamin'ity indray mitoraka ity satria fotoana iray ahafahany mampiseho fa tsy mpanakanto fotsiny izy. Nihira tao amin'ny 'Worth' an'i Mary Gauthier ilay mpihira ary nahazo fiderana tamina mpitsara efatra izy rehetra.
Nidera an'i Sarah i Simon Cowell tamin'ny filazany fa novonoiny fotsiny io. Rehefa nanontany azy i Sofia Vergara hoe inona no naharitra ela nahatongavany Manana ny talentan'i Amerika , Nilaza i Sarah fa nieritreritra izy fa tsy mendrika. Nanome tanana azy ny tontolon'ny mpitsara amin'ny dingana manaraka.
Ny olon-drehetra dia tia ny fisian'i Sarah Potenza amin'ny sehatra, ary be ny toetra amam-peo. Hita miharihary fa nahatsapa fankasitrahana izy teo, ary amin'izao fotoana izao dia io no zavatra iray lehibe manadanja.
Vakio ihany koa: Iza moa i Mj Rodriguez? Izay rehetra momba ny vehivavy trans voalohany nahazo fanendrena amin'ny sokajy Lead Acting ao amin'ny Emmys 2021
Iza moa i Sarah Potenza?
Ny dia nataon'ilay zazalahy 41 taona tamina The Voice dia tsy araka ny nety ho naniriany azy. Na eo aza izany, mbola nahazo mpanaraka marobe tamin'ny Internet i Sarah, miaraka amina mpanaraka 15000 ao amin'ny Instagram ary manodidina ny 116.000 ao amin'ny TikTok.
Ilay teratany Providence, Rhode Island dia nandalo ny sehatry ny audition an'ny The Voice tamin'ny 2015 ary niditra tao amin'ny ekipan'i Blake Shelton. Tafavoaka velona mandra-pahatongan'ny lalao mivantana izy saingy nesorina. Volana vitsivitsy taty aoriana dia niaiky tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny South Band Tribune i Potenza fa tsy nikasa ny handresy ilay seho velively izy fa kosa mitady hitady vola ho an'ny rakikirany irery.
Nanomboka fanentanana Kickstarter izy taty aoriana mba hanampy amin'ny famoahana ny rakikirany irery voalohany. 'Ny anjarako' tamin'ny voalohany ny anaran'ilay rakikira, saingy niova taty aoriana, ary i Sarah Potenza dia nanangona $ 41.780 tamin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra.
Sarah Potenza dia namoaka ny rakikirany voalohany, 'Monster,' tamin'ny 2016. Natao tamin'ny Snax Records izy io, saingy tsy miaraka amin'izy ireo intsony.
Navoakan'i Sarah ny rakikirany manaraka, 'Road to Rome,' tamin'ny taona 2019. Navoaka tsy miankina izy io ary nosokajina ho Blues. Mba hahazoana fanampiana amin'ity tetik'asa ity dia nanomboka fanentanana fanindroany i Kickstarter.
Seho fanta-daza i Sarah Potenza ary nanao fampisehoana kely maro. Mety hamerina ny fomba fampisehoana talenta ho an'ny rakikirany manaraka izy.
Vakio ihany koa: Iza i Justin Ervin? Ny zava-drehetra momba ny vadin'i Ashley Graham ho modely dia manambara fa bevohoka izy ary miandry ny zanany faharoa
Sarah Potenza dia nilaza fa niara-nilalao tamin'ireo mpihira sy tarika hafa izy. Saingy tsy nifaninana tamin'ny mpandihy, mpanao hatsikana, akrobat ary mpanao majia mihitsy izy izay misy ankizy koa.
Saingy mbola afaka manaporofo fa tena mpifaninana amin'ilay seho izy.
Vakio ihany koa: Hunter Echo 20 taona dia nanisy marika hoe 'pedofile' taorian'ny nanehoany hevitra momba ny firaisana tamin'i Millie Bobby Brown tao amin'ny Instagram Live
miaina indray andro isan'andro
famantarana ny olona tsy VE IANAO
inona no antenaina aorian'ny daty 5
i lana ve mbola manambady an'i rusev
iza no nandresy tamin'ny firongatry ny mpanjaka 2016